September, 2019 | Job Vacancy in Myanmar
2019-09-30 12:04:25 , စီးပွား​ရေးလဲလုပ်ချင်တယ် ဒါ​ပေ…
စီးပွား​ရေးလဲလုပ်ချင်တယ် ဒါ​ပေမယ့်ဘာစီးပွား​ရေးစလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့သူ​တွေအတွက် Discount ​တွေချထားတုန်း သင်တန်း​လေးအ​ပြေးတတ်လိုက်ရ​အောင် ??
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-30 by admin.
?️ 19 Oct 2019 (Sun) Time –4PM –6PM
?1.5 months( 29,000 Ks)
? Certificate တန်းလေးနော် !!?
? HR ဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုသူများ၊
? HR Management ပညာရပ်များကို အချိန်တိုအတွင်း လေ့လာသင်ယူပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Professional Diploma လက်မှတ် ရယူလိုသူများ၊
? HR ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ၀င်လိုသူများ၊
? HR ဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်လိုသူများ၊
? HR ဖြင့် အသက်မွေးပြီး၊ ဘ၀အတွက် Career ကို HR တစ်ယောက်အဖြစ် လျောက်လှမ်းဖို့ စတင်ချင်သူများ၊
? လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဦးဆောင်နေရသူများ၊
? လုပ်ငန်းခွင်သို့ စတင်ဝင်ရောက်မည့်သူများ၊
? ရုံးတစ်ရုံးမှာ ဦးဆောင်ဖို့ စီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုအပ်သော Skill များကို လေ့လာသိရှိချင်သူများ၊
?? Special Discount ??
2019-09-28 19:06:41 , “ International Certificate သင…
“ International Certificate သင်တန်းများအပြင် UK Diploma သင်တန်းများကို Parami International College မှာတက်ရောက်နိုင်ပါပြီ ”
?Exam လုံးဝ(လုံးဝ) ဖြေစရာမလို၊သင်တန်းကြေးလဲသက်သာ၊သင်ကြားမှုလဲထိထိရောက်ရောက်နဲ့မို့လူပြည့်မြန်ပါတယ်. .
?21 ရာစု ရဲ့ စီးပွားရေး ယာဉ်ကြောမှာ အများထက် ခေါင်းတလုံးသာချင်သူ များအတွက် #Business_Management #HR #Sales #Marketing #Project #Financial #Accounting သင်တန်းများ ကို အများနဲ့မတူပဲ 29000 ကျပ်ထဲနဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
သီတင်းကျွတ် Promotion လေးတွေက Management သင်တန်း သုံးခု တက်ရုံနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သင်တန်း တခု*** free free free * ဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲ..??
?စာရွက်စာတမ်းကြေး ထပ်ပေးစရာမလိုတဲ့အပြင် ပညာပါရမီမှပေးတဲ့စာအုပ်၊ Recycle အိတ်လှလှလေးတွေ၊ဘောပင်တွေအပြင် Free Class / Free Seminar များကိုရာသက်ပန်အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့််လဲရှိသေးတယ်နော်?
October လအတွက် Certificate တန်းခွဲများ
?️ 19 Oct 2019 (Sat) Time –2PM –4PM
?1.5 months( 22,000 Ks)
?️ 20 Oct,2019 (Sun) Time – 12 PM –2PM
? 20 Oct 2019 (Sun) Time –2PM –4PM
? 20 Oct 2019 (Sun)4PM –6PM
? 1.5 months( 29,000 Ks)
October လအတွက် Diploma တန်းခွဲများ
?Diploma In Business Management (NCFE,UK)
? 26 Oct 2019, Time – 10 AM – 12 PM
? 400,000 Ks
(အစောဆုံးအပ်နှံသူ ၁၅ ဦးအတွက် သင်တန်းကြေး
?Diploma In HR Management (NCFE,UK)
? 26 Oct 2019, Time – 12 PM –2PM
?Diploma In Sales & Marketing Management (NCFE,UK)
? 26 Oct 2019, Time – 10 AM -12 PM
?Diploma In Financial Management (NCFE,UK)
# ပညာပါရမီကျောင်းသားဟောင်းများအတွက် Discount + Promotin(100,000Ks) နှစ်ထပ်ကွမ်းခံစားခွင့်ဖြင့် UK Diploma တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော် ….
တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။ရွှေပြည့်စုံ စားသောက်ဆိုင်(အပေါ်ထပ်)၊( ရွှေညောင်ပင် – ဆေးခန်း နှင့်ရွှေညောင်ပင် – ဒံပေါက်ဆိုင် ကြား )
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-28 by admin.
2019-09-27 08:19:29 , ယနေ့ ရွှေဈေးသုံးသပ်ချက် (27.9….
ယနေ့ ရွှေဈေးသုံးသပ်ချက် (27.9.2019)
ယနေ့လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (XAUUSD)မှာ 1504 နဲ့ ဈေးစဖွင့်ခဲ့ပြီး အမြင့်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့ဈေးမှာ 1517 ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်
Buy – 1501/ TP -1503 / SL -1498
Sell -1510 / TP -1508 / SL -1512
R1 – 1510
R2 – 1512.85
R3 – 1517.45
Pivot Level – 1505.39
S1 – 1500.79
S2 – 1597.94
S3 – 1493.33
1USD – 1532 kyats
1SGD – 1109.6 kyats
1Euro – 1675.9 kyats
1GBP – 1888.6 kyats
1 Thai Baht – 50.008 kyats
#CMX ရဲ့ရွှေဈေးသုံးသပ်ချက်များအတိုင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ပါက like and share ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာ့ရွှေနှင့်ငွေကြေးဈေးကွက် အရောင်းအဝယ်နှင့်သင်တန်းများအား စုံစမ်းလိုပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-27 by admin.
2019-09-26 12:25:24 , အနာဂါတ်မှာ ပိုမိုတိုးတတ်​အားေ…
အနာဂါတ်မှာ ပိုမိုတိုးတတ်​အား​ကောင်းလာမယ့် ကမ္ဘာ့​ရွှေနဲ့​ငွေ​ကြေး​ဈေးကွက်ကို ဝင်​ရောက်​လေ့လာချင်သူ​တွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်က သင့်ရဲ့လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိ​နေပါပြီ
ကမ္ဘာ့​ရွှေနဲ့​ငွေ​ကြေး​ဈေးကွက်ကို စိတ်ဝင်စားသူ​တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်နဲ့မန္တ​လေးတို့တွင် Forex Trading Beginner Course ကို စာ​တွေ့​ရောလက်​တွေ​ရော သင်ကြား​ပေးသွား​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
​Secondry Business အ​နေနဲ့ လုပ်ကိုင်လိုသူများ
အိမ်မှာပဲ ထိုင်​နေပြီး ဝင်​ငွေရှာလိုသူများအ​နေနဲ့ သင့်​တော်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်
သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်ရက် – 26.10.2019 မှ 30.10.2019 အထိ
သင်တန်းချိန် – ​နေ့လည်1:00 မှ 4:00 အထိ
သင်တန်း​ကြေး – 100,000 ကျပ်
CMX Advisor Team Myanmar
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-26 by admin.
2019-09-23 22:24:06 , Please admin LCCI level1+2 နှ…
LCCI level1+2 နှင့်​ Accounting Trainning Class
Sunday only( section B )
29.9.2019 (Sunday only)
Time: 1:00 to 3:00am⏰⏰
ဒါအပြင်​ UK exam ကာလ ပြီးရင်​ အလုပ်​ဝင်​တဲ့အခါ အဆင်​​ပြေ​စေဖို့အတွက်​ Trainning ပါ​ပေးပါသည်​
✔ computer basic, ?
?-Export and Import ဆိုင်​ရာ Knowledge များ
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-23 by admin.
2019-09-22 17:40:37 , #CMX ရဲ့ Beginner Class ကိုအပ်…
#CMX ရဲ့ Beginner Class ကိုအပ်ပြီး အခုပဲ Discount ရယူလိုက်ပါ
"Beginner guide for Financial Market"
? Financial ဈေးကွက်ထဲမှာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ပြီး မီလျံနာအထိဖြစ်ချင်သူ​တွေ
?ကိုယ်ပိုင်စီးပွား​ရေး (Own business) တစ်ခုထူ​ထောင်ချင်သူ​တွေ၊
?Financial Market ကို အခုမှစလေ့လာမည့် New beginner တွေအတွက်
ဝါရင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ Trainer တွေက Financial ​ဈေးကွက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကမ္ဘာ့​ရွှေ​ဈေးများ၊ ​ငွေ​ကြေး​ရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အ​​ခြေခံပညာရပ်များကို စာ​တွေ့​ရောလက်​တွေ့ပါ သင်ကြား​ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခု​နော်…
ဒါ့အပြင်သင်တန်းပြီးသွားလို့ ကိုယ်တိုင်အ​ရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အနီးကပ်အကြံဥာဏ်​ပေးသွားဦးမှာပါ သင်တန်းတတ်ပြီးသွားရင်​တောင်မှ အ​ရောင်းအဝယ်မလုပ်တတ်​သေးမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့သူ​တွေအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုဘူး​နော်
သင်တန်းသားဦးရေ 15ယောက်သာကန့်သတ်ထားတာမို့လို့ အမြန်ဆုံးအပ်နှံမှ စိတ်ချရမှာအသေအချာပါ (လက်နှေးပြီးလူပြည့်သွားရင်တော့ နောက်လသင်တန်းထဲပဲ ပါသွားမှာနော်)
ပထမဦးဆုံးအပ်နှံသူ 7ဦးကို 10%Discount ​ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ အခုပဲမြန်မြန်​လေး ဖုန်းဆက်လိုက်​ပါ
သင်တန်းသင်ကြားမည့်သူ Trainer က​တော့..
ကိုဖြိုး​ကျော်ခန့် ( Jonney)
Financial market ထဲကို 2014 ခုနှစ်မှာစတင်ဝင်​ရောက်ခဲ့ပြီး Tradingအ​တွေ့အကြုံ 5နှစ်အထက်ရှိတဲ့ Trainer တစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်
5days ( 3hours per day)
26.9.2019 မှ 30.6.2019 အထိ
Basic Course – 100,000 ကျပ်
1ဦးချင်းအထူးသီးသန့်သင်တန်း – 150,000 ကျပ်
( special 1 by 1 course)
#သင်တန်းချိန် – နေ့လည် 1:00 မှ 4:30 အထိ
လိပ်စာ – အမှတ် 138/142/သိမ်ဖြူလမ်းမကြီး/White Cloud Condo/ Unit 4C/ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်/ရန်ကုန်မြို့။
သင်တန်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်စုံစမ်းချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူကိုယ်တိုင်လာအပ်ချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ် 138/142, သိမ်ဖြူလမ်း, White Cloud Condo, Unit 4C ကို လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-22 by admin.
2019-09-21 21:39:40 , #CMX ရဲ့ Beginner Class ကိုအပ်…
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-21 by admin.